22 Zvino iyo yakandiratidza rwizi rwemvura youpenyu,+ inoonekera sekristaro, ichiyerera ichibva pachigaro choumambo chaMwari necheGwayana+ 2 ichidzika nepakati pomugwagwa wakafara weguta racho. Mhiri kuno kworwizi nemhiri uko kwakanga kuine miti+ youpenyu inobereka zvibereko zvomuchero gumi nezviviri, ichibereka michero yayo mwedzi mumwe nomumwe.+ Mashizha emiti yacho akanga ari okurapa marudzi.+ 3 Hapachazovi nokutuka+ chero kupi zvako. Asi chigaro choumambo chaMwari+ necheGwayana+ zvichava muguta, uye varanda vake vachamuitira basa dzvene;+ 4 vachaona chiso chake,+ uye zita rake richava pahuma dzavo.+ 5 Uyewo, usiku hunenge husisipo,+ uye havazodi havo chiedza cherambi uyewo havazovi nechiedza chezuva, nokuti Jehovha Mwari achavavhenekera,+ uye ivo vachatonga semadzimambo nokusingaperi-peri.+ 6 Zvino iyo yakati kwandiri: “Mashoko aya akatendeka uye ndeechokwadi;+ chokwadi, Jehovha Mwari wemashoko akafuridzirwa+ evaprofita+ akatuma ngirozi yake kuti iratidze varanda vake zvinhu zvinofanira kukurumidza kuitika.+ 7 Tarirai! Ndiri kukurumidza kuuya.+ Anofara munhu ari kuchengeta mashoko ouprofita hwomupumburu uyu.”+ 8 Naizvozvo, ini Johani ndini ndakanga ndichinzwa uye ndichiona zvinhu izvi. Pandakanga ndanzwa uye ndaona, ndakawira pasi kuti ndinamate+ ndiri pamberi petsoka dzengirozi yakanga ichindiratidza zvinhu izvi. 9 Asi yakandiudza kuti: “Chenjerera! Usadaro! Ndinongovawo muranda pamwe chete newe nowehama dzako vaprofita+ nowevaya vari kuchengeta mashoko omupumburu uyu. Namata Mwari.”+ 10 Iyo yakandiudzawo kuti: “Usaisa chisimbiso pamashoko ouprofita hwomupumburu uyu, nokuti nguva yakatarwa yava pedyo.+ 11 Uyo ari kuita zvisina kururama, ngaarambe achiita zvisina kururama;+ uye munhu ane tsvina ngaarambe achiva netsvina;+ asi munhu akarurama+ ngaarambe achiita zvakarurama, uye mutsvene ngaarambe achiitwa mutsvene.+ 12 “‘Tarirai! Ndiri kukurumidza kuuya,+ uye ndine mubayiro+ wandinopa, kuti ndipe mumwe nomumwe maererano nebasa rake.+ 13 Ndini Arufa naOmega,+ wokutanga nowokupedzisira,+ mavambo nomugumo. 14 Vanofara vaya vanogeza nguo dzavo,+ kuti vave nekodzero yokuenda kumiti youpenyu+ uye kuti vapinde muguta nepamagedhi aro.+ 15 Kunze ndiko kune imbwa+ nevaya vane tsika yokuita zvemidzimu+ nezvifeve+ nemhondi nevanonamata zvidhori nomunhu wose anoda nhema uye anoramba achireva nhema.’+ 16 “‘Ini, Jesu, ndakatuma ngirozi yangu kuti ikupupurirei pamusoro pezvinhu izvi nokuda kweungano. Ndini mudzi+ nomwana+ waDhavhidhi, uye nyamasase.’”+ 17 Mudzimu+ nomwenga+ vanoramba vachiti: “Uya!” Munhu wose anonzwa ngaati: “Uya!”+ Munhu wose anonzwa nyota ngaauye;+ munhu wose anoda ngaatore mvura youpenyu asingatengi.+ 18 “Ndiri kupupurira munhu wose anonzwa mashoko ouprofita hwomupumburu uyu ndichiti: Kana munhu akawedzera+ pazvinhu izvi, Mwari achamuwedzera matambudziko+ akanyorwa mumupumburu uyu; 19 uye kana munhu akabvisa chinhu pamashoko omupumburu wouprofita uhwu, Mwari achabvisa mugove wake pazvinhu zvakanyorwa nezvazvo mumupumburu uyu—haazomubvumiri kudya zvinobva pamiti youpenyu+ uye kuva muguta dzvene.+ 20 “Iye anopupurira zvinhu izvi anoti, ‘Chokwadi; ndiri kukurumidza kuuya.’”+ “Ameni! Uyai, Ishe Jesu.” 21 Mutsa usina kukodzera kuwanwa waShe Jesu Kristu ngauve nevatsvene.+